Usoro na Ọnọdụ | WatercolorPNG
License zuru ezu a bụ nkwekọrịta n'etiti gị ("ị") Na WatercolorPNG, anọchite anya ya Vadim Rozov, S. Kovalevskoy 49 / 64 Dnipro, 49000 Ukraine.
WatercolorPNG na-enye gị ikikere iji Usoro ahụ (dịka akọwapụtara n'okpuru) dịka okwu nke License a zuru ezu. Ijiji nke ihe (gụnyere ihe ndị enyere n'okpuru freebies na / ma ọ bụ freebies kwa izu) bụ n'okpuru okwu nke License zuru ezu.
"Ogwe aka" - Nchịkọta nlezianya nke ọma na ihe ngwọta nke ejikọtara ọnụ maka nkwekọrịta gị.
"Ngwaahịa Ọgwụgwụ" - Ihe osise ma ọ bụ ihe ntanetịpụtara site na Ị na-eji nkà na mgbalị onwe onye na-ejikọta Nke ahụ na ihe ọ bụla ọzọ ebumpụta ụwa ebe enwere ike ịmepụta Ihe ma ọ bụ wepụ ya site na Ngwa Ọgwụgwụ.
"Nkebi" - Ihe osise, ụdị ọnụahịa, faịlụ / ịkpụ, faịlụ na / ma ọ bụ ihe jikọrọ ihe ọ bụla dị otú ahụ na-ebudata na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
"Project" - Otu (1) Project pụtara ọrụ nke ịmepụta End Ngwaahịa maka Onwe Gị (Personal License) ma ọ bụ ndị ọzọ (Ahịa ma ọ bụ Extended Commercial License) n'okpuru otu echiche ahụ nke a ga-agwụ n'ime oge ahụ. Dịka onye ahịa ga-eme ka ụdị 4 dị iche iche nke Ngwa End (dịka uwe elu, okpu, akpa, na akwụkwọ) iji Nkeji na Ngwa Ọgwụgwụ niile ga-edozi ya n'aka onye ahịa n'otu ụbọchị ahụ. Ngwa Ngwa ndị a nwere ike bipụta na ego dịka ikikere. Otú ọ dị, na ihe omume ahụ, onye ahịa dị iche (ọ bụghị onye ahịa ahụ dị na mbụ) na-abịakwute gị ka ịmepụta otu End Ngwaahịa na-eji otu Nkebi ahụ, nke a ga-ewere dị ka Ụlọ Ọhụrụ ma choo Ikikere ọhụrụ.
3. Ụdị ikikere:
Anyị na-enye ụdị ikikere 3: Personal, Commercial and Extended Commercial. N'okpuru ebe a ka a na-eji ikike eme ihe:
Licensee - Naanị Otu;
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ (ma ọ bụ oche) - Single Onye ọrụ (ma ọ bụ oche);
Azụmahịa - Ebughị ikikere;
Ejighị Azụmahịa (Personal) - Hapụrụ;
Mmemme na-enweghị ihe mgbochi / mbipụta nke End Ngwaahịa;
Ngalaba ọ bụla a na-eji maka Njikere nke onwe gị nke (i) adịghị enye ego ọ bụla iji nweta Onwe Gị ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ; (ii) abughi ime ka ndi mmadu gha ahia; na (iii) ejighị ya na ụlọ, ikpo okwu ma ọ bụ ihe omume metụtara ọrụ ọ bụla, ọrụ obodo ma ọ bụ na-enweghị uru.
Licensee - Otu ma ọ bụ iwu iwu (Ụlọ ọrụ);
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ (ma ọ bụ oche) - Nke na-ejighi n'aka otu ụlọ ọrụ;
Azụmahịa azụ maka Ngwaahịa Na-ahụ Maka Ahụ na Digital;
Debe aka na 5,000 ahịa / mbipụta Jikọtara ngụkọta Nkịtị End Ngwaahịa na Digital End Ngwaahịa;
Mgbasa ozi na Nkwalite - Mgbasa Ozi Na-adịghị Egwu (Bido) Mgbasa Ozi N'ime Azụmahịa Obodo. A na-eji otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi eme ihe;
Ọhụụ Mgbasa Ozi - 500,000 ndị na-ekiri ụwa niile;
Mgbe Ịzụrụ ogwe, njedebe mbipụta mbipụta 5,000 na-emetụta onye ọ bụla Nkebi, ọ bụghị Bundle dum;
Ejila weebụsaịtị, ngwa, ma ọ bụ egwuregwu vidiyo;
Ntughari ọ bụla / sublicense nke Ahịa Ikikere na ụdị faịlụ ma ọ bụ asọmpi egwu na ikikere Ahịa ikikere.
Debe aka na 250,000 ahịa / mbipụta Jikọtara ngụkọta Nkịtị End Ngwaahịa na Digital End Ngwaahịa;
Mgbasa ozi na Nkwalite - Mmetụta nke Mgbasa Ozi. Jiri otutu mgbasa ozi mgbasa ozi na-akwado.
Ọdịdị Mgbasa ozi - Ọ dịghị njedebe na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ekiri ndụ oge niile
Mgbe Ịzụrụ Nkwụsị, njedebe mbipụta mbipụta nke 250,000 na-emetụta onye ọ bụla Nkebi, ọ bụghị Bundle dum.
Jiri ikikere weebụ, ngwa, ma ọ bụ egwuregwu vidiyo.
"Ojiji" nke ojiji bu ihe o bula: (i) nke gunyere mgbanwe nke ego ma obu ihe ndi ozo, (ii) nke na akwalite ahia (dika, nchikota ndi ozo, ulo oru, ma obu mmekorita), ahia, ma obu ozi (iii) enweta ego ma ọ bụ nlebara anya ọzọ ma ọ bụ rịzọlt, n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ n'ụzọ ntụgharị, nke ikikere nke Licensee nke Ahịa Ikike. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla ma ọ bụ karịa n'ime (i), (ii), na (iii) zutere, mgbe ahụ, a na-ewere onye ọrụ ahụ "Azụmahịa".
Ịmepụta ihe mgbidi a ga-eji mee ihe na ụlọ oriri egwu
Na-enye ndị ahịa ahịa n'efu ihe atụ nke Product Ọgwụgwụ
Na-akwụ ụgwọ iji mepụta End Ngwaahịa maka ọrụ ebere
3.2 - Azụmahịa Na-abụghị Aka (Personal)
A na-eji ojiji nke "abụghị nke azụmahịa" mee ihe maka naanị ebumnuche nkeonwe; ihe ọ bụla nke na-ezute nkọwa nke "Ịzụ ahịa ahịa" enweghị ike ịghọ Njikere ahịa.
Ịmepụta agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ maka agbamakwụkwọ nwa gị nwaanyị
Mee ka nwa gị nwoke nwee ejiji Halloween
Kpọtụrụ kaadị Krismas maka ezinụlọ gị na ndị enyi gị
4. NDỊ NA-ECHI EKWU NA NDỊ NA-ECHICHE / MGBE NDỊ NA-ECHICHE
"Njedebe Ojiji" nke Asambodo Akwụsịpụtara pụtara ịnweta ikikere Ahịa dịka ekwenyebere n'okpuru ebe a:
4.1 - Ọgwụgwụ Ngwaahịa
✓ Ngwa ahụ: Licensee nwere ike ịmepụta ngwaahịa na njedebe anụ ahụ dịka, mana ọ bụghị nanị na, uwe, kaadị, akwụkwọ ịkpọ òkù, akwụkwọ mmado, akpa, stampụ, kandụl, akwụkwọ akụkọ, ihe ịrịba ama, mmebe ụlọ, wdg.
✓ Product packaging: Licensee nwere ike ịmepụta ngwaahịa ngwaahịa ma ọ bụ dijitalụ ngwaahịa nkwakọba ma ọ bụ ọnụahịa dị ka, ma ọ bụghị nanị na, igbe, akwụkwọ, akwụkwọ mmado, ma ọ bụ ihe nchịkwa, wdg.
✓ Digital Ngwaahịa: Licensee nwere ike ịmepụta ngwaahịa njedebe dijitalụ maka nkwụsịtụ dị ka atụmatụ sticki, ihe dị n'ime ebe nrụọrụ weebụ, wdg.
✓ Digital or Print Publications: Licensee nwere ike iji Ahịa Ikikere na dijitalụ ma ọ bụ bipụta akwụkwọ dị ka magazin, kaadị, akwụkwọ ịkpọ òkù, akwụkwọ foto, na akwụkwọ edemede, e-akwụkwọ ma ọ bụ akwụkwọ mbipụta.
✓ Ọnụ ọgụgụ Nkwụsị na Njedebe Ngwaahịa maka Azụmahịa: Lee iwu ikikere gị (Personal / Commercial / Extended Commercial). Kpọtụrụ WatercolorPNG maka ikikere omenala ma ọ bụrụ na Licensee chọrọ nkwụsị ka ukwuu maka iji azụmaahịa.
4.2 - Social Media, Marketing, na Mgbasa ozi
✓ Mgbasaozi Onwe Onye Maka Ahịa Ndị Na-abụghị Azụmahịa: Ikikere nkeonwe Ọ bụrụ na ọ dabara (dịka, maka onye ọ bụla), otu (1) nke onwe ma ọ bụ nke ọ bụla na mgbasa ozi mgbasa ozi na-abụghị maka azụmahịa.
✓ Nkwekọrịta Ahịa nke Ahịa maka Ụlọ Ahịa: Azụmahịa ma ọ bụ nke a na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ dabara (dịka, na azụmahịa), a na-enye ndị License niile nwe ma ọ bụ jikwaa ụlọ ọrụ mgbasa ozi maka mgbasa ozi. Akwụkwọ ikikere gbasara azụmahịa abụghị oke na akaụntụ na akwụkwọ ndị nwe ikikere ma jikwaa ya maka Njikwa.
✓ Mgbasa Ozi Ahụ (Mbipụta) Maka Ịzụ ahịa: Akwụkwọ ikikere gbasara azụmahịa Ọ bụrụ na ọ dị (dịka, ịzụ ahịa) maka mgbasa ozi dị ka mbadamba akwụkwọ, akara ngosi, mgbasa ozi a na-ebipụta, wdg maka Azụmahịa na-eji ahịa na mpaghara, ahịa mba, na ahịa ụwa. "Ahịa" Obodo "pụtara na egosiputa ma ọ bụ nkesa nke mgbasa ozi ndị a kwadoro ga-adị n'ime raịlị 200-mile n'ime ala otu mba / mba. "Ahịa" National pụtara nkesa ma ọ bụ ngosi nke mgbasa ozi karịrị ihe mgbanaka 200 mile na otu mba / mba. "Ahịa Global" pụtara mgbasa nkesa nke mgbasa ozi na mba karịrị mba.
✓ Ahịa Mgbasa Ozi Maka Ịzụ ahịa: Akwụkwọ ikikere gbasara azụmahịa Ọ bụrụ na ọ dabara (dịka, ahịa) maka mgbasa ozi Ịntanetị dị ka mgbasa ozi nke Google Mgbasa ozi, Bings Mgbasa ozi, Mgbasa ozi Facebook, Adreesị Linkedin, wdg.
4.3 - Mgbasa ozi na gụgharia nke Ngosi Foto na Audiovisual
✓ Mgbasa ozi na gụgharia: Mgbasa ozi na ntaneti site na netwọk, USB, internet, satellite, pay-per-view, video on demand or Streaming of picture motion and audiovisual works, gụnyere mgbasa ozi
✓ Ọnụ ọgụgụ Nkwụsị na Mgbasa ozi na Gụgharia: Nkwụsịtụ dabere na ụdị ikikere gị.
4.4 - Ọdịdị Digital
✓ Development Software Development, Mobile App Development, Development Desktop Desktop, na Egwuregwu Egwuregwu vidiyo maka iji azụmaahịa ma ọ bụ na-abụghị nke azụmahịa: Licensee nwere ike iji Ahịa Ahịa na otu (1) aha maka iji azụmaahịa ma ọ bụ Nlere ahịa. Ọnụ ọgụgụ Nkwụsị na Development Ngwaahịa: Enwere ike ịmepụta Akụrụngwa Ikikere n'otu ebe nrụọrụ weebụ, ngwa, egwuregwu vidiyo (ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla, ngwa, ma ọ bụ egwuregwu vidio tinyere (n'enweghị njedebe) ngwaahịa ndị nọchiri anya, chọrọ akwụkwọ ikike dị iche) na ikikere bụ isiokwu ọzọ na njedebe na 4.1 (End Ngwaahịa). Dịka ọmụmaatụ, Licensee nwere ike iji Njirimara Ahịa na 1 mobile app title nke nwere ike ibudata ma ọ bụ rere ya na 250,000 (2) oge niile (dịka njedebe na Nkebi 4.1), ma Licensee anaghị eji Njirimara Ahịa na 1 mobile nchịkọta ngwa na aha 1 maka ụlọ ọrụ nke ọ bụla na-ere 250,000 (2) ugboro (n'ihi na a ghaghị ịzụta akwụkwọ ikike dị iche maka ngwa ngwa mkpanaka na aha ntanetị). Mgbochi ndị a dị ukwuu na-ezubere na nkwụsị ego, ya mere onye ikikere nwere ike ịzụta ikikere abụọ maka otu Akaụntụ ikikere iji mee ka ikike dị ukwuu (dị ka okwu nke ikike ọ bụla dabara). (2) Ọnụ ọgụgụ Nkwụsị dabeere na ụdị ikike gị.
5. NDỊ NA-ECHICHE (ndị a nwere ike ịnwe na ikikere omenala, kpọtụrụ WatercolorPNG ịchọta ihe ndị ọzọ):
5.1 - Ọgwụgwụ Ngwaahịa
✗ On-Demand Ngwa (Dịka Bipute-na-achọ na Mepụta-na-achọ Ọrụ). Ihe ọ bụla nke na-enye onye ọ bụla ọzọ aka karịa Licensee, dịka njedebe njedebe, iji hazie ngwaahịa ejirila ma ọ bụ nke anụ ahụ machibidoro, ma maka Ojiji azụmaahịa ma ọ bụ Ịzụ ahịa abụghị nke azụmahịa. Nke a na-agụnye, ma ọ bụghị nanị, "na-ebipụta na-achọ", "nyere iwu" ma ọ bụ "ibudata na achọ" ngwa.
5.2 - Ọdịdị Digital
✗ Jiri dị ka mkpado Web ma ọ bụ Fonts agbakwunyere: Ị nwere ike ịbanye na Asambodo Njirimara nke bụ font, tinyere enweghị njedebe n'ime mkpokọta weebụ, akwụkwọ-e-akwụkwọ, ma ọ bụ e-akwụkwọ maka Ịzụ ahịa ma ọ bụ na-abụghị nke azụmahịa.
5.3 - Trademark na Copyright
✗ Ahịa ahia: Akwụsịghị Ahịa nwere ike ọ gaghị eji dịka akụkụ nke ụghalaahịa, akara ọrụ, akara ngosi, aha-ahịa, ma ọ̄ bụ ihe yiri ya ma ọ bụrụ na (1) na Ahịa Ikikere a gbanwere kpam kpam na (2) abụghị isi ihe nke Njedebe Jiri. Enweghị ihe ọ bụla, nkwekọrịta ikikere a nyere Licensee - na Licensee agaghị achọ - deba aha, chebe, ma ọ bụ mee ka ikike ọ bụla mara aha ma ọ bụ ikike ndị yiri ya na Akaụntụ Asambodo n'onwe ya nke a ghaghị ịhapụ na ndebanye aha ọ bụla. Kpọtụrụ WatercolorPNG maka ikikere omenala ma ọ bụrụ na achọrọ ikike ndị a.
✗ Copyright: Licensee anaghị ekwu na ikikere ikikere (ma ọ bụ mgbanwe nke ya) dịka ọrụ nwebisiinka (akpa ikikere nke ikikere ị ghaghị ịhapụ ya na ndebanye aha ọ bụla).
5.4 - Teknụzụ nke Ọdịnihu
✗ Ikikere ahụ na-ejedebe na ikikere akwadoro eji ekwupụta na Agreement License: a na-echekwa teknụzụ na ojiji ndị dị n'ihu n'ọdịnihu ma ghara itinye ya n'ime ikikere.
6. NDỊ ECHICHE NA-EKWU. Ọ dịghị ihe dị na nkwekọrịta ikikere a nyere Licensee nke ọ bụla n'ime ikike ndị na-esonụ, a na-ejigide ikike niile ndị a:
6.1 - ✗ Ntọala ma ọ bụ Sub-Licensing the License Asset ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla dị na ya na ụdị faịlụ isi iyi ka a machibidoro iwu.
6.2 - ✗ Ntọala ma ọ bụ ikikere ikikere nke Ahịa Ahịa ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla dị na ya n'ụzọ na-asọ asọmpi na mbụ ikikere Ahịa bụ nke a machibidoro iwu (dịka, dị ka akụ ma ọ bụ template ngwaahịa).
6.3 - ✗ Na-eme ọha ma ọ bụ na-ekere òkè Njirimara Ahịa n'ụzọ ọ bụla nke na-enye ndị ọzọ ohere ibudata, wepụ, ma ọ bụ redistribute Asset License dị ka faịlụ standalone (nke pụtara naanị faịlụ nke onwe ya, kewapụ na njedebe njedebe ọrụ nke ekwesiri ekwenye) bụ nke a machibidoro iwu.
6.4 - ✗ Jiri Ahịa Ikikere na-akpali agụụ mmekọahụ, fraudulent, immoral, infringing, iwu na-akwadoghị, iwe egwu, mkparị, ma ọ bụ ihe nkwutọ, a machibidoro iwu, gụnyere, na-enweghị njedebe, ihe ọ bụla eji Akwụsị Ikike nke:
(i) nwere ike ịmepụta ihe ize ndụ nke nhụjuanya, ọnwụ, mmerụahụ ma ọ bụ nke uche, obi mgbawa, ọnwụ, nkwarụ, nkwarụ, ma ọ bụ ọrịa anụ ahụ ma ọ bụ nke uche gị, onye ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ anụmanụ ọ bụla;
(ii) nwere ike imebi ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ mebie onye ọ bụla ma ọ bụ ihe onwunwe;
(iii) na-achọ imerụ ụmụaka ma ọ bụ jiri ụmụaka site n'itinye ha na ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị, na-arịọ maka nkọwa ndị mmadụ nwere ike ịmata ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ;
(iv) nwere ike ime ma ọ bụ mee ka mpụ ma ọ bụ mmebi;
(v) nwere ihe ọmụma ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla anyị chere na ọ bụ iwu akwadoghị, na-emerụ ahụ, mkparị, agbụrụ ma ọ bụ na-ewe iwe, nkwulu, imebi iwu, imebi nzuzo nke onwe onye ma ọ bụ mgbasa ozi ọha na eze, na-emekpa ahụ, na-eweda ndị ọzọ ala (n'ihu ọha ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ), na- egwu, ihe rụrụ arụ, ma ọ bụ ihe ọzọ na-adịghị mma;
(vi) nwere ozi ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla na-akwadoghị (gụnyere, na-enweghị njedebe, nkwupụta nke ozi nchịkwa n'okpuru iwu nchebe ma ọ bụ nzuzo nzuzo ndị ọzọ);
(vii) nwere ozi ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla na ị nweghị ikikere ịnweta n'okpuru iwu ọ bụla ma ọ bụ n'okpuru mmekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ ntụkwasị obi;
(viii) nwere ihe ọmụma ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla ị maara na-ezighi ezi ma dị ugbu a; ma ọ bụ
(ix) na-akwalite ịkpa ókè agbụrụ, imebiga ihe ókè, ịkpọasị ma ọ bụ mmerụ ahụ ọ bụla megide ụdị ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla.
6.5 - ✗ Ngha ụgha na-anọchite anya ndị edemede na / ma ọ bụ nwe ikikere nke ikikere Ahịa a machibidoro iwu.
6.6 - ✗ Ihe ozo ozo ekwenyeghi na mpaghara 4 (Akwụsịla na-eji na ọnụọgụ / Mgbasa Ozi) a machibidoro iwu.
7. NDỊ MMADỤ NA-EBE NDỊ NA-AGBA NDỊ NA-AGBA NA-EKWU (Njikere nke ato na-achọ onye nke atọ iji nweta ikike nke aka ya)
7.1 - Njikwa nke atọ na-achọ Ikikere nkewa.
Nkwekọrịta ikikere a ekweghị ka ndị ọzọ nweta ma ọ bụghị maka njirimara ndị nwere ikikere ka akọwapụtara n'okpuru ebe a na Nkebi 7.2.
7.2 - Akwụsịla Nchịkwa Mba Dị Ntu.
Licensee nwere ike ịdabere ikike ikike nke onye ikikere nye ndị ọzọ na ọnọdụ atọ:
(a) iji mepụta, ahịa, ma ọ bụ kesaa ngwụcha agwụ agwụ (akọwapụtara n'elu) nke jiri Ahịa Ikikere (dị ka ekwenyebere na ya ebe a) mgbe emere ya n'aha Licensee, ma ọ bụrụ na enwere ike inye ikikere ahụ ma ọ bụrụ na a machibidoro iwu ahụ site na nbudata, ịmegharị ma ọ bụ jiri Asambodo Ịgba Ụgwọ na ụzọ ọ bụla na Licensee ga-eme mgbe niile hụ na ịkwadoro okwu nke ikikere License site na nke a na-agbanyeghị aka na nke a maka nkwenye ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, Licensee nwere ike iji ndị nkesa iji rụpụta ma ọ bụ kesaa ngwaahịa anụ ahụ maka nzaghachi ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa; N'otu aka ahụ, Licensee nwere ike iji ndị na-enye ndị ọzọ, dịka ndị na-eweta ọrụ nchịkọta iji kwado weebụsaịtị ma ọ bụ ndị na-ebipụta weebụsaịtị iji gosipụta mgbasa ozi dijitalụ;
(b) nye onye na-ahụ maka ọrụ na-eje ozi dị ka onye na-enye ikikere ọrụ ikikere iji nye ọrụ na Licensee na - (i) Onye ọ bụla na - akwado ya ga - eme ka nkwenye nke Usoro License ahụ na - akwado ya na - ) Licensee zụrụ ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke oche maka License Asset Licensee (dịka, onye ọ bụla chọrọ ikike dị ka ekwuru n'elu); ma
(c) nye onye ahịa nke Licensee ebe Onye ikikere na-enyefe onye ahịa ahụ ka ọ rụchaa Ọgwụgwụ (akọwapụtara n'elu, dị ka ebe nrụọrụ weebụ agwụla, mgbasa ozi, ngwaahịa, ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa). Na nke a, enwere ike inye ikikere nke a ma ọ bụrụ na a machibidoro sublicensee iwepụta, ịmegharị ma ọ bụ jiri Asambodo Ịgba Ụgwọ n'ụzọ ọ bụla karịa ka ọ dị mkpa iji Ope End Jiri na Licensee na-enye onye ahịa. Licensee ga-eme mgbe niile hụ na ị kwadoro usoro okwu ikikere nke ikikere site n'aka ndị na-akwadoghị ma nọgide na-etinye aka na nke a maka nkwenye ọ bụla.
8.1 - Mgbe achọrọ ego n'aka: Ntughari akwukwo nile choro ka otuto; Otú ọ dị n'ihi na ederede na-eji akwụmụgwọ eme ihe naanị achọrọ ebe a na-enye ndị ọzọ ikike nke ihe ikikere. Ego, mgbe achọrọ, ga-enwe ike ịnweta ma na nso nso na Akaụntụ Asambodo na, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, yiri nke ahụ na ntinye na ịkwanyere ùgwù na ntinye ego ndị ọzọ
8.2 - Otu esi enye onyinye: "[Ahịa aha njirimara ikike] nwebisiinka WatercolorPNG.com"
9. MGBE A GA-AHỤ N'ỤLỌ ỌZỌ KWESỊRỊ
9.1 - Ihe onwunwe nke ikike
Ihe di n'ime dijitalia di na watercolorpng.com, tinyere, n'enweghi oke nkpa, Asusu Agbara Iche, nke United States na ikike nwebisiinka na iwu ndi ozo. Dị ka n'etiti gị na WatercolorPNG, WatercolorPNG na-ejigide ikike nke ikikere, ma nyere onye ikikere ndị nwere oke, ndị na-abụghị ndị ọzọ, ndị na-abụghị ndị na-ebufe, na ndị na-enweghị ike ịmepụta (ma e wezụga dị ka ekwuputara na ha dị n'elu), nwebisiinka iji Njirimara Ahịa dị ka ekwuputara n'elu n'elu okwu a. Ikike ndị ọzọ niile, dịka n'etiti Licensee na WatercolorPNG na WatercolorPNG na-edebe. Licensee nwere ike ọ gaghị ekwupụta ikike ọ bụla na Akaụntụ Ahịa n'onwe ya ma ọ bụ ikike ọ bụla iji nweta ego si n'aka ọha mmadụ na-achịkọta maka ịtụle foto, nchịkọta dijitalụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nke abụọ nke Ahịa Ikikere. Ntuba aka na "zụta" ma ọ bụ "ere" (ma ọ bụ okwu yiri nke) nke Ahịa Ikikere na-ezo aka n'ịzụta ikikere ikikere ma ọ bụghị ịzụta ikike nwebiisinke ma ọ bụ rụọ ọrụ n'onwe ya. Dị ka onye nyere ikikere, ikike nke onye nwe Licensee na mgbasa ozi na / ma ọ bụ ngwaọrụ nke edere Akaụntụ Edenyere, ma ọ bụrụ na ọ bụla, dị iche ma ghara inye ikike ọ bụla ikike, aha ma ọ bụ mmasị na ya na imewe nke Njirimara Ahịa n'onwe ya. Nkwekọrịta ikikere a anaghị enye Licensee ikike ọ bụla maka ikikere ma ọ bụ ikike ikike ọ bụla nke ọzọ (ma ọ bụghị nwebisiinka) na Akaụntụ Ahịa.
9.2 - Nkwụsị
WatercolorPNG nwere ike ịkwụsị nkwekọrịta ikikere ọ bụla n'oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ikikere emebi iwu ọ bụla ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla na WatercolorPNG, ebe ọ bụ na Licensee kwesịrị ozugbo: kwụsịrị iji Njirimara License; ehichapụ ma ọ bụ bibie mbipụta ọ bụla; na, ọ bụrụ na achọrọ, gosi WatercolorPNG na ederede na Licensee agbasoro ihe ndị a. Ọ bụrụ na Licensee na-eji Ahịa Ahịa na netwọk mgbasa ozi ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ nke atọ na n'elu ikpo okwu ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ (ma ọ bụ na-ekwupụta na ọ na-ezube iji) Njirimara Njirimara maka nzube nke ya ma ọ bụ n'ụzọ na-emegide Nkwekọrịta ikikere a, ikike ndị e nyere maka iji ya mee ihe ga-akwụsị ngwa ngwa, na ihe omume ahụ, n'elu arịrịọ WatercolorPNG, Onye ikikere kwetara ikpochapụ ọdịnaya ọ bụla site na ntaneti dị otú ahụ ma ọ bụ weebụsaịtị.
9.3 - Ịchụpụ ọdịnaya
WatercolorPNG nwere ike ịkwụsị ikikere Ahịa Ikikere n'oge ọ bụla na naanị uche ya. Mgbe ịchọrọ site na WatercolorPNG, ma ọ bụ na ihe ikikere nke Licensee, na Akaụntụ Akwụsị nwere ike ịdabere na nkwupụta nke mmejọ nke ikike nke ndị ọzọ, WatercolorPNG nwere ike ịchọrọ Licensee ozugbo, na ụgwọ nke onwe gị: kwụsịrị iji Njirimara Ahịa, ihichapụ ma ọ bụ bibie ụdị ọ bụla; ma hụ na ndị ahịa, ndị nkesa na / ma ọ bụ ndị na-enye ikikere ikikere na-eme otu ihe ahụ. WatercolorPNG ga-enye gị ọdịnaya nnọchi (kpebiri na WatercolorPNG na mkpebi ikpe ziri ezi ya) na-akwụ ụgwọ, dịka ọrụ ya, n'okpuru isiokwu ndị ọzọ nke ikikere License.
9.4 - Nyocha
N'ịchọpụta nke ọma, Licensee kwetara inye WatercolorPNG ihe atụ nke ọrụ ma ọ bụ njedebe njedebe nke nwere Njirimara Akwụsị, tinyere site n'inye WatercolorPNG n'enweghị ụgwọ ịnweta ohere ọ bụla a na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ n'elu ebe a na-emepụta Ihe Njirimara License. Tụkwasị na nke a, na ọkwa ọhụụ, WatercolorPNG nwere ike, ma ọ bụ site na ndị ọrụ ya ma ọ bụ site n'aka ndị ọzọ, ndekọ ndekọ nke Licensee metụtara Njikọrịta License na Licensee nke Ahịa Ahịa iji chọpụta nkwụnye ụgwọ na ịkwụ ụgwọ na okwu ndị ọzọ nke ikikere License Agreement. Ọ bụrụ na odide ọ bụla na-ekpughe nkwụnye ụgwọ site na Licensee na WatercolorPNG nke pasent ise (5%) ma ọ bụ karịa nke ọnye Licensee kwesịrị ịkwụ ụgwọ, mgbe ahụ na mgbakwunye na-akwụ WatercolorPNG ụgwọ nke nkwụ ụgwọ na ụdị ọgwụgwọ ọ bụla nke WatercolorPNG nwere, ị nwekwara kweta na ị ga-akwụghachi WatercolorPNG maka akwụ ụgwọ nke nhazi ahụ.
Ịgaghị ekerịta, kesaa, nyefe ma ọ bụ resell ihe na ihe ọ bụla ọzọ. Ndị nke atọ / ndị ahịa ga-azụta License zuru ezu ma ọ bụrụ na ha chọrọ igbanwe nchịkọta nke Ngwaahịa Ọgwụgwụ Ị na-aghọ aghụghọ maka ha. Ị ga-enye ndị ahịa gị ihe ndị dị na ya.
Ewezuga mkpado, Enweghị gị ikikere iji Ihe dị na "dịka" dị n'okpuru njikwa azụmahịa (yabụ iji Nkeji dị ka ọ na-enweghị iji nkà ọ bụla aka na mgbalị iji mepụta Product Ọgwụgwụ agaghị ekwe), dịka nke a a ga-emeso ya dị ka ịchụghachi ihe anyị nwere. A na-ekwe ka a na-eji njirimara mee ihe na "dịka" dịka eji eji azụmahịa, Otú ọ dị, a ghaghị ịgbatị fon ma ghara ịgụnye faịlụ OTF / TTF mbụ maka iji azụmahịa.
Ewezuga ihe nkesa ihe eji emepụta logo nke enyere aka gi na nka nke logos, I gaghi eji ihe maka ma obu tinye aha n'ime logo, njirimara ndi mmadu, akaraahia ma o bu akara akara. Enweghị ike ịdenye Product End dị ka ụghalaahia na mpaghara ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na e mepụtara Ngwa End ahụ site na iji ihe nkesa nke logo.
E wezụga Njikere Onwe, anyị na-atụ anya na ị ga-emepụta Ngwaahịa Ngwụgwụ mbụ bụ ebe ekwesịrị ka emegharịa ihe ahụ site na ime obere / obere mgbanwe na ihe. I kwesiri ịmepụta ọrụ ọhụụ ọhụrụ nke a pụrụ ịmata site na Nkebi mbụ. Biko buru n'uche na e nwere ndị ọzọ ndị ọzọ ga-eji otu Nkebi ahụ ma ya mere ị ga-achọ iji hụ na Ọgwụgwụ Ngwaahịa gị dị iche iche dịka o kwere mee iji zere asọmpi ma ọ bụ ebubo ebubo.
Ị gaghị ekwe ka ihe ndị a ga - ewepụta, nweta ma ọ bụ ibudata site na onye ọ bụla ọzọ karịa Onwe Gị.
11. Ị na-anọchite anya na akwụkwọ ikike ahụ:
Ị bụ ma ọ dịkarịa ala 18 afọ ma ọ bụ nwere ikike ịbanye na License zuru ezu;
Ịgaghị eji Ihe ahụ n'ụzọ ọ bụla nke a na-akwado ma ọ bụ License zuru ezu;
Ozi I nyere anyị bụ eziokwu na eziokwu, gụnyere na-enweghị njedebe niile ịkwụ ụgwọ na ozi ịgba ụgwọ; ma
Ewezuga dịka e kwuru na nke a na Nzuzu zuru ezu, akaụntụ ọ bụla meghere ma ọ bụ kwadoro site na Ị na saịtị anyị ga-enweta ma jiri ya mee ihe maka ebumnuche na usoro ndị edepụtara na Nke a License zuru ezu.
12. Enweghi ike
Ị kwenyere na ị ga-agbachitere, kwenye ma jide anyị na ndị ọrụ anyị, ndị nduzi, ndị ọrụ anyị, ndị nwe anyị, ndị nnọchiteanya, ndị nnọchiteanya, ndị ikikere na onye ọ bụla ọzọ na anyị na ndị ọ bụla nọchiri anyị, (ndị na-enye ikikere), ma nyefee n'efu na enweghị ihe ọ bụla niile na-azọrọ (tinyere, enweghị njigide, nkwupụta ndị ọzọ), ụgwọ, ụgwọ, ụgwọ, ụgwọ, ma ọ bụ mmefu, gụnyere ndị ọka iwu kwesịrị ekwesị, ụgwọ na mmefu, na-ebute na Njiri gị na ihe ọ bụla ma ọ bụ mmebi ọ bụla , akwụkwọ ikike ma ọ bụ nkwa ọzọ nke Ị mepụtara na Nke a zuru oke ikikere.
Ọ bụrụ na I mebighị okwu nke Usoro Azuzu a, anyị ga-akwụ gị ụgwọ ruo ụtụ ego nke United States Dollar One hundred (US $ 100) ma ọ bụ ego niile Ị kwụrụ ụgwọ maka ihe ọghọm ọ bụla nwere eji ihe anyị na-eme ka ọ bụrụ ikpe ọ bụla na-akwado ma ọ bụ egwu nke atọ, na-ekwu ma ọ bụ na-ese okwu megide gị. Ihe omuma anyi di na onodu nke I nyere anyi:
Ogologo ụbọchị ise azụmaahịa (5) bụ ụbọchị e dere edere site na ụbọchị Ị maara ma ọ bụ ezi uche kwesịrị ịma nke nkwupụta ahụ ma ọ̄ bụ ihe egwu egwu, ebe ọkwa dị otú ahụ ga-agụnye nkọwa niile nke nkwupụta ahụ ma mara ya na hello@watercolorpng.com , Ntị: General Counsel; Ozi zuru oke, enyemaka, na imekọ ihe maka agbachitere ma ọ bụ nhazi ya; ma
Na nhọrọ anyị, njikwa nke nchebe ọ bụla, mmezi ma ọ bụ mmemme metụtara ya.
Anyị agaghị enwe ụgwọ maka nkwupụta ọ bụla na-adabere na nkwenye anyị ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla na iwu na / ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ akwụtara tupu ị nweta nkwupụta zuru ezu nke nkwupụta dị ka enyere na ya.
A na-enye ihe na saịtị anyị "dịka dị, dịka dịnụ, na mmejọ niile" ma, ma ọ bụrụ na akọwapụtara na Nke a License zuru ezu, anyị anaghị eme ihe ọ bụla ma ọ bụ nkwenye, kwupụta ma ọ bụ gosipụta, tinyere ihe ọ bụla akwadoro nke ahịa ma ọ bụ ahụike maka otu nzube. Ị kwenyere na anyị ma ndị mmekọ anyị, ma ọ bụ ndị isi anyị, ndị nduzi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị nwe anyị, ndị nnọchiteanya, ndị nnọchiteanya, ndị nyere ikikere, na (ndị ọzọ) ikikere (ndị ọzọ karịa gị) ga- mmebi, ma ọ bụ ihe ọghọm ọ bụla, ụgwọ ma ọ bụ nkwụsị nke sitere na iji ma ọ bụ na-ejighị ihe, ma ọ bụrụ na a gwara ndụmọdụ ndị dị otú ahụ, ma ọ bụ dụọ ọdụ na o nwere ike imebi ihe ndị ahụ.
14. Ikike na Iwu Kwesịrị Ekwesị
Nkọwa na mkpochapụ nke Iwu a zuru oke ga-achịkwa iwu nke Ukraine n'okpuru ikike ya ma na-enweghị ihe gbasara iwu nke iwu. Ụlọikpe Ukraine ga-enwe ikike a na-ahụ maka esemokwu ọ bụla na-ebili na arụmọrụ nke License zuru ezu.
Ị gaghị ekenye ikike ma ọ bụ ọdịmma gị n'okpuru Nkwekọrịta zuru ezu na onye ọ bụla ọzọ na-enweghị nkwado ederede tupu anyị edee ya.
16 Ọ dịghị Nhọrọ Nke Ndị Nke Atọ
Onye ọ bụla na-esoghị License a zuru ezu (ma aha ma ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụghị onye ahụ, aha ya, ma ọ bụ mara ya, ma ọ bụ ga-abụ akụkụ nke otu klas ndị a kpọrọ aha, nke a na-akpọ ma ọ bụ mata, na Nkwekọrịta zuru ezu a) enweghị ikike ọ bụla iji mezuo ikike a zuru oke ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime okwu ya.
17. Nkwekọrịta niile
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla emere nke License zuru ezu a ga-eme ka ọ ghara ịdị irè ma ọ bụ ghara ịdị irè, eziokwu ahụ agaghị emetụta ndokwa ọ bụla ọzọ, a ga-egosikwa nke fọdụrụ na License a zuru oke iji mee ka atụmatụ ndị ahụ dịkwuo mma. Akwụsịghị ma ọ bụrụ na ndị otu ọ bụla iji mezuo ndokwa ọ bụla nke Nkpezu zuru oke a agaghị ewere ya na ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-eme n'ọdịnihu ma ọ bụ ndokwa ọ bụla. I kwenyewo ma kwenye nkwekọrịta gị na License a site na ibudata ihe ma ọ bụ ogwe.
18. Njikọ Kọmputa.
I kwenyewo ma mezuo nkwekọrịta gị na Nke a na Electronicically Complete site na ibudata ihe (s).
19. Mbanye Iwu
Ị ga-edozi ihe ị na-ekwu maka nkwụghachi n'ime ụbọchị 30 mgbe a zụrụ ngwaahịa. Enwere ike ịchọta ego nkwụghachi ụgwọ:
Ị naghị enweta njikọ na ngwaahịa ahụ
Ị na-enweta ngwaahịa na-ezighi ezi
Ihe ezighi ezi n'ime ngwaahịa
Ihe ndị e kwuru na ọ bụ njehie ka anyị na-akwụ ụgwọ na nkwụnye ego 100%.
Nwere ajụjụ ndị ọzọ? Lelee anyị FAQ ma ọ bụ soro gị na ndị enyi anyị na-akwado enyi Ebe a.